Kyaw Thu – “ကျော်သူရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါက် အနုပညာရင်ဖွင့်သံပန်းချီပြပွဲ” | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်စိုး ● လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာ - အပိုင်း (၄၆)
မေငြိမ်း - သမီးပျိုအမေအနေနဲ့ ရေးတဲ့စာ..
ဝိသေသ - စင်္ကာပူရဲ့ အိမ်သာအလှူ နဲ့ မြန်မာရဲ့ ရေအလှူ
ကိုသစ် (သီတဂူ) - ပြည်တော်ပြန်နှင့် စကားပြောခြင်း
မောင်သာမည - ဂုဏ်သိက္ခာများနှင့် အိမ်ပြန်ချိန်
Kyaw Thu – “ကျော်သူရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါက် အနုပညာရင်ဖွင့်သံပန်းချီပြပွဲ”
ကျော်သူ၊ မေ ၂၄၊ ၂၀၁၂
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက မြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်မေတ္တာ
ပို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက ရဟန်းတော်တွေကို ဆွမ်း၊ ရေချမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ အဲဒီ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလကစပြီး အမေရိကန်အလည်အပါတ်ရောက်လာတဲ့ထိတိုင်အောင် ကျနော့် အနုပညာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အားလုံးကို ပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုကျနော်အမေရိကန်ကို အလည်ရောက်ခိုက်မှာ ကျနော့် နှလုံးသားနဲ့ ခံစားရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေ လူထုကိုပြသခွင့်ရခြင်းဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါက် အနုပညာရင်ဖွင့်သံလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
(ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ ပန်းချီဆရာ၊ သုဘရာဇာ)
25th – 27th May 2012
May. 25th 6-8 pm
May 26th – 27th 01:00 pm to 06:00 pm
May. 27th 6-8 pmPlace: PROJECT REACH
39 Eldridge Street, 4th Floor,
Direction: Take the D or B to Grand Street,
Walk one block down to Eldridge.
It’s Between Canal St. and Hester St.
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:လူမှုရှုခင်း, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ